Nidaamka Bentley wuxuu ku dhawaaqayaa Naqshadeeyaha OpenSite - Geofumadas Hada Waa Laheli Karaa
Bentley Systems ayaa ku dhawaaqay in OpenSite Designer hadda la heli karo
Mee, 2019 tabo cusub, Microstation-Bentley
Marka laga reebo waxay isku xirnaanta qaababka dhabta ah, u-helidda iyo soo-saarayaasha isdaba-joogga ah si loo dedejiyo horumarka mataanaha laba-geesoodka ah ee loogu talagalay naqshadaha shaqada madaniga ah
Bentley Systems, Incorporated, bixiyaha caalamiga ah ee xalalka dhameystiran ee software iyo adeegyo twin-gaab ah si loo dhiirrigeliyo hawlaha naqshadeynta, dhismaha iyo kaabayaasha, ayaa maanta lagu dhawaaqay helitaanka OpenSite Designer, codsigeeda isku dhafan ee loogu talagalay wareegyada shaqada ee shaqada madaniga ah iyo horumarinta magaalooyinka inta lagu jiro wajiyada masraxeed, hordhac iyo faahfaahsan. OpenSite Designer kor u BIM isticmaalaya design site 3D dheregtaan, oo daboolaya shuruudaha goobta Qaabaynta 3D macquul ah ka images of drones iyo baaritaano, falanqaynta geotechnical, Qaabaynta dhul, Khariidadeynta goobta iyo optimizing Nigeria, Tusaale iyo falanqaynta dheecaan daadadka, Tusaale fiican ee korontada dhulka hoostiisa, wax soo saarka ee sawirada iyo qurxino dhaceen faahfaahsan.
OpenSite Designer waxay u oggolaaneysaa naqshad farsamo oo degdeg ah oo soo noqnoqonaysa, iyada oo ka faa'iideysanaysa macluumaadka xaddiga ah ee laga helay daruuraha mugdiga ah, meshes 3D dhab ah, GIS iyo ilo kale si loo fahmo xaaladaha jira ee goobta. Isku xirnaanshaha xalalka injineernimada geotechnical PLAXIS iyo SoilVision Bentley waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta qorshooyinka goobta macluumaad cusub oo ku saabsan guryaha ciidda firfircoon, oo ay ku jiraan awooda qaadista, walwal iyo barokac.
cunt OpenSite Designer, dadka isticmaala waxay abuuri karaan moodhalka 3D ee caqli-gal ah kuwaas oo ku jira macluumaadka goobta, xogta dhulalka, meelaha baabuurta la dhigto, baaluqyada dhismayaasha, marin-u-helka, lugaha, naqshadeynta iyo waxyaallaha la xiriira shaqada. Inta lagu jiro naqshad horudhac ah, injineernimada dhismuhu wuxuu dhamaystiri karaa oo si mug leh u hagaajin karaa qaabka, iyada oo ka faa'iideysanaysa fududeynta otomaatigga ah, oo wax ka qabata isbedelada farsamada. Si loo dhamaystiro wareegyada shaqada ee dhijitaalka ah ee mashruuca, OpenSite Designer si buuxda u taageeraan naqshad faahfaahsan ee injineernimada dhismaha, oo ay ku jiraan soo saaridda dhamaan soo-saarka mashruuca.
In badan oo injineerada dhismaha ah, OpenSite Designer eryi doonaa design shuqulladiisa sokeeye ka profiles dhaqanka guriga iyo 2D deegaanka Qaabaynta 3D a socday, hubinta xog geospatial ku ool ah Haydarooliga falanqaynta, geotechnical iyo earthworks. OpenSite Designer, kaas oo ka mid ah wanaajinta falanqaynta ee teknoolojiyada SITEOPS ee Bentley, waa bedelka kartida kartida shaqooyinka PowerCivil, topoGraph, GEOPAK Site, InRoads Site y MXSite ee Bentley.
"Dabeecadda iskaashiga ee wareegyada shaqada ee digital-ka ah ee isku-darka falanqaynta iyo jilidda qaabka iyo qaabaynta ayaa ka muuqata naga cusub OpenSite Designer. Waxaan ku faraxsanahay inaan markii ugu horreysay helno xal dhamaystiran oo loogu talagalay naqshadaynta shaqada iyo horumarinta magaalooyinka si loo dedejiyo digitalization injineerada dhismaha. Dustin Parkman, madaxweyne ku-xigeenka, is-dhex-galka qaab-dhismeedka kaabayaasha madaniga ee Bentley Systems.
"Markasta Langan, waxaan mar walba raadineynaa fursado aan iskaga dhigno tartanka iyadoo ay ugu wacan tahay farsamadeena iyo waayo-aragnimadeena farsamo. Inta lagu jiro marxaladda qorshaynta, waxaan isticmaalnay SITEOPS si aan u hagaajino goobta, u falanqeyno dhaqdhaqaaqyada dhulka iyo aqoonsiga kharashyada. Hadda waxaan rajeyneynaa in aan isticmaalno OpenSite Designer si aan u soo saarno naqshadeenna iyo qoraallo faahfaahsan. " Michael Semeraro, Jr., PE, PP, lammaanaha maamulka, EVP, Langan International.
Erayada Greg Bentley, Agaasimaha Bentley Systems: "Waxaa xiiso leh, ka dib seddex sano oo la soo dhaafay hormarinta horumarka software injineeriga, culeyska OpenSite Designer, codsiga aad u heli karo oo lagama maarmaan ah in isku daraa kulan kaamil ah in bartilmaameedka la fududaato in la isticmaalo iyo korsashada aan horay loo arag. Indeed u bixisaa wixii aynu rumaysan nahay in sifooyinka muhiimka ah ee mataano kaabayaasha digital: xaqiiqo ee images ah, sax ah oo ka mid ah matalaada iyo ayna iyo aaminnimo si aad ugu qorshayso kac oo dhan dib u. qanacsanaanta Job ee injineerada in shuqul iyo naqshado shaqada si weyn ay ka faa'iideysan doonaan ka horumar weyn oo soo bandhigay by OpenSite Designer. Ha ka waaban inaad isku daydo! "
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan OpenSite Designer.
Ku saabsan Bentley Systems
Bentley Systems waa bixiyaha caalamiga ah ee xal software dhamaystiran waayo, injineero, injineero, xirfadlayaasha geospatial, constructors, iyo milkiilaha-wadayaasha keentay, oo ujeedadiisu tahay in kor loogu qaado howlaha design, dhismaha iyo kaabayaasha. codsiyada BIM iyo injineernimada ku salaysan MicroStation ka Bentley, iyo adeegyada mataano digital daruurta, hirgelinta mashruuca drive (ProjectWise) oo ku soo celi on hantida gaadiidka (AssetWise) oo camal kale ee dadweynaha, biilasha , warshadaha warshadaha iyo khayraadka iyo hay'adaha hay'adaha iyo kuwa ganacsiga.
Bentley waxay leedahay wax ka badan Shaqaalaha 3.500, waxay soo saartaa in ka badan 700 malaayiin dollar oo ah dakhli sanadeedka 170 iyo, tan iyo 2014, waxay maalgelisay in ka badan 1.000 malaayiin doolar oo cilmi baaris, horumarin iyo iibsasho ah. Tan iyo markii la aasaasay ee 1984, shirkadda ayaa ku hadhay gacmaha shan Aasaasayaasha ay, walaalaha Bentley. falalka Bentley by martiqaad shaqeeyaan suuqa gaarka loo leeyahay NASDAQ. Www.bentley.com
Post Previous" Hore #BIM - Koorso dhameystiran oo habka BIM ah
Post Next Shirka GIS ee Bilaashka ah - Meey 29 iyo 30, 2019Next »